အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး ပလပ်စတစ် ခေါက် စျေးဝယ် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း လှည်း အလုပ်ရုံ စိတ်ကြိုက် နှင့် လက္ကား - Wahsun နောက်ဆုံးပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အိမ်ထောင် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ > ခေါက် လှည်း နှင့် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း > အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး ပလပ်စတစ် ခေါက် စျေးဝယ် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း လှည်း
အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး ပလပ်စတစ် ခေါက် စျေးဝယ် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း လှည်း
အဆိုပါ အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး ပလပ်စတစ် ခေါက် စျေးဝယ် လှည်း ဖြစ် လုပ် ၏ မြင့်သော အရည်အသွေး PP ပစ္စည်း နှင့် ဖြစ် အကြမ်းခံ။ အဆိုပါ လူမီနီယံ ရောစပ် အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး hနှင့်le ဖြစ် နောက်ထပ် rust-pro၏ နှင့် နောက်ထပ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ အဆိုပါ လှည်း နိုင် ဖြစ် အလွယ်တကူ ခေါက် ဘို့ လွယ်ကူသော တင်ဆောင်လာသော နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ အဆိုပါ ခေါက် စျေးဝယ် လှည်း's roller များမှာ လုပ် ၏ PVC ပစ္စည်း, နှစ်3" အချင်း roller, ခြောသော ကိုလှိမ့ နှင့် အနိမ့် noဖြစ်e. အဆိုပါ ခေါက် စက်ဘီး နိုင် ဖြစ် နေရာချ တွင် အဆိုပါ ကား ဘို့ လွယ်ကူသော ခရီးသွား နှင့် စျေးဝယ်.
အဆိုပါအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းပလတ်စတစ်ခေါက်စျေးဝယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလှည်း၏ 1.Product နိဒါန်း
high-quality ပစ္စည်းများ: ကတာရှည်ခံသည်အရည်အသွေးမြင့် PP ပစ္စည်းလုပ်ခဲ့ပါ။ လူမီနီယမ်အလွိုင်းတယ်လီစကုပ်လက်ကိုင်ကိုပိုပြီးသံချေး-အထောက်အထားများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။
Rolling ဘီး: ချောမွေ့ကိုလှိမ့နှင့်အနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အတူ PVC ပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းနှစ်ဦး3"အချင်းရထားဘီး။
အမည်: အဆင်ပြေကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်စျေးဝယ်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ, ခရီးသွားကိရိယာများ, အိမ်မှာသို့မဟုတ်ဂိုဒေါင်ထဲမှာ, ကားထဲတွင်ထားရှိနိုင်ပါသည်လွန်းအာကာသကိုတက်ယူမထားဘူး။
အဆိုပါအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းပလတ်စတစ်ခေါက်စျေးဝယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလှည်း၏ 2.Product Parameter (Specification)
PP + လူမီနီယမ်
* 38CM 45 * 42
OEM + လိမ္မော်ရောင်
အဆိုပါအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းပလတ်စတစ်ခေါက်စျေးဝယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလှည်း၏ 3.Product Feature ကိုထိုအလျှောက်လွှာ
ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့အဆင်ပြေ, စျေးဝယ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးခရီးသွား tools တွေကိုအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်ဂိုဒေါင်ထဲမှာ, ကားထဲတွင်ထားရှိနိုင်ပါသည်, အလွန်အကျွံအာကာသကိုတက်ယူမထားဘူး။
5.Packaging & Delivery & ငွေပေးချေမှုရမည့် Term
စက္ဏူထူအရွယ်အစား: * 49 91 * 30cm,6PCs / စက္ဏူထူ
70% တင်ပို့မတိုင်မီအသီးအနှံမတိုင်မီ 30% သိုက်,
ဖြေဒါဟာ MOQ ဘို့, က 15-20days ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသင့်ရဲ့အရေအတွက်ပေါ်လျှင်မူတည်ပါသည်။
တစ်ဦးက: 30% သိုက်, သင်္ဘောမရောက်မီ 70% ငွေပေးချေမှု
hot Tags:: အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး ပလပ်စတစ် ခေါက် စျေးဝယ် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း လှည်း, စိတ်ကြိုက်, စက်ရုံ, လက္ကား, ပူသော ရောင်းချခြင်း, မူပိုင်ခွင့်, နောက်ဆုံးပေါ်, dueable, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အနိမ့် စျေးနှုန်း
ပေါ့ပါး မိုဘိုင်း ပလပ်စတစ် စျေးဝယ် ခေါက် လှည်း
ပလပ်စတစ် ခေါက် စျေးဝယ် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း လြျှောဖှတျရနျစရာ ခရီးသွား ခရီးဆောင် လှည်း နှင့် ဘီး
ဝန်ထုပ် နှင့် လိပ် ခေါက် ခရီးဆောင် foldable ခေါက် ပလပ်စတစ် ကုန်စုံ စျေးဝယ် tလိပ်ey လှည်း
foldable ဝန်စည် လှည်း ဘို့ ဝန်စည် တင်ဆောင်လာသော
foldable မိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန် ပလပ်စတစ် ဝန်စည် လှည်း
အဆင်ပြေ ခေါက် သေတ္တာ စျေးဝယ် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း အိတ် သတျတော foldable ကိုလှိမ့ လှည်း